Chitoro Changu | David Bridburg Artist
Maitiro Ekutenga Chipo Changu Chitoro
Iwe uri kutsvaga chimwe chinhu chitsva uye chakasiyana muhunyanzvi. Inofanirwa kuve inoshanda here? Iwe unoda here zvachose nzira nyowani yekugadzira hunyanzvi?
My Post Yemazuva ano hunyanzvi inosanganisira aesthetics yausati wamboona nhasi.
Kudzoka kukoreji ndakazvipokana kuti ndirege kugadzira zvekufananidzira kana zvisingaonekwe zvemifananidzo. Izvi zvinorevei? Ini ndaida kuita chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya. Makomputa anopa nhasi muimbi kugona kuburitsa munzira mbiri nyowani pamacro uye madiki emazinga mune basa.
Chii chinoita kuti basa iri rive rakasiyana kwazvo? Sarudzo dzangu dzemusoro wenyaya. Seye anowana zvigadzirwa, ini handigadzire parody. Kazhinji ndinogadzira zvidimbu zvemhando yepamusoro nenzira dzakasarudzika.
Yakarongedzwa 18 Monet naDavid Bridburg
Prints anouya se canvases, photopaper, simbi, acrylic uye huni. Kutsiva uye matting kunowanikwa pazvinodiwa. Museum mhando zvigadzirwa zvinoshandiswa.
Recent 11 naDavid Bridburg
Iyo yemukati yemashizha ine imwe yeangu mavhezheni eVincent van Gogh's "Almond Blossoms". Ini ndinoshandisa zvakare mifananidzo yandinogadzira mumabasa angu ese.
Electric Guitar muOrange Tsvuku naDavid Bridburg aka JazzDaBri
Iyo JazzDaBri, aka David Bridburg, Unganidzo ndeye kuyedza kuroora minimalist mutsara dhizaini nemafomati mafomu. Iwo akateedzana anotamba. Kune makumi maviri nemaviri zviridzwa zvemimhanzi imwe neimwe ichiuya ichipesana neina akasiyana mavara kumashure.
Iwo akateedzana ndee studio yemimhanzi, mudiki anotanga kutamba, mudzidzisi wemimhanzi uye nevaya vanofarira mimhanzi.
Music Notes 32 naDavid Bridburg
Iyo Post Contemporary Unganidzo inogara mifananidzo yangu yemhuka. Imbwa, mhumhi, gava, katsi hombe, nyani, walrus uye nezvimwe… .. Nei "Music Notes x" zita? Iyo ingori inochengetedza nzvimbo kune yakajairika chinhu isu maartist tinoita mu "Isina zita x".
Nepo hunyanzvi hwazvino hushambadza nyaya yebasa sechinhu chakatumirwa mifananidzo yemazuva ano chinopa hupenyu kuchinhu. Uku kutaura kwevanhu pamusoro pemurume.
Ichi chava chidhori chepurasitiki. Ndinofungidzira handigoni kuzvibatsira. Ndaifanira kuenda zvakadzika. lol
Iko Contemporary Unganidzo inoteedzera kuvandudza kwenyaya ichive chinhu sezvo nhevedzano ichienderera.
Ndatenda kune vatengi vangu. Vaya venyu vakanditengera kanopfuura kamwe chete, mabatsira kuti basa rangu riitike. Avo vanondiwana ini kwenguva yekutanga vanogamuchirwa.
Ini ndakazvipira kupfuura nakare kose kune hunyanzvi. Ikozvino ndiyo yekupinda kwangu muiyo crypto NFT nyika. Kufanana nevazhinji maartist sekunonoka. Zvandinokuvimbisa iwe kuzviita nenzira yangu yakasarudzika.
PS, ini handisi munhu anosvuta, asi iwo mashizha anogadzira humwe hunyanzvi hwekutonhorera.